BUDDHIST TERMS' Dictionary: NOBLE ONE - အရိယ
NOBLE ONE - အရိယ
NOBLE ONE Ariya
အရိယ - အရိယာ၊ မြင့်မြတ်သူ။
အရိယာသည် ကိလေသာအချို့ကိုဖြစ်စေ၊ အားလုံးကိုဖြစ်စေ ပယ်သတ်ပြီးသူဖြစ်၏။ အပယ်တံခါးပိတ်ပြီးသူ ဖြစ်သည်။
(၁) သောတာပန္န - သောတာပန်၊ အရိယာမဂ်ရေအလျဉ်သို့ရောက်ပြီး၊ မဂ်စိတ်, ဖိုလ်စိတ်ရပြီးသူ၊ အများဆုံး ခုနှစ်ဘ၀ဖြစ်ပြီးနောက် ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်။
(၂) သကဒါဂါမိ - သကဒါဂါမ်၊ ဤလူ့ဘုံသို့ တစ်ကြိမ်သာ လာတော့မည့် ပုဂ္ဂိုလ်။
(၃) အနာဂါမိ - အနာဂါမ်၊ သေလျှင် ကာမသုဂတိ ၇-ဘုံ၌ မဖြစ်ရေတော့ဘဲ ရူပ အရူပဗြဟ္မာဘုံ၌သာဖြစ်၍ ပရိနိဗ္ဗာန် စံဝင်မည့်ပုဂ္ဂိုလ်။
(၄) အရဟန္တ - ရဟန္တာ၊ ကိလေသာအားလုံး ပယ်သတ်ပြီးဖြစ်၍ ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်တော့မည့် ပုဂ္ဂိုလ်။
An Ariya isanoble one who has destroyed some or all of the defilements. He is precluded from falling to the woeful state of apaya.
(1) the Streamwinner or sotᾱpanna who has entered the stream of Path-knowledge, having attained Path-Consciousness and Fruition-Consciousness and who is destined to realize Parinibbana, the Ultimate Peace, after having seven rebirths at the most.
(2) the Once-Returner or Sakadᾱgᾱmi, who having reached the second stage of Path-Knowledge will be reborn only once asahuman being before realizing the Ultimate Peace.
(3) the Non-Returner or anᾱgᾱmi, who having reached the third stage of Path-Knowledge will be reborn only in the Fine-Material Sphere or the Non-Material Sphere before realizing the Ultimate Peace.
(4) the Arahat who has destroyed all the defilements and is ripe for realizing the Ultimate Peace.